Momba ANAY - ALinks
Ny fampahalalam-baovao tsara tsara dia mety hahatonga ny dianao, na ny fiainanao, hahafinaritra kokoa ary indraindray hisoroka anao amin'ny olana lehibe.
ALinks dia tranonkala momba ny fiainana iraisam-pirenena sy ny fitsangatsanganana ho an'ny rehetra. Izy io dia noforonina tamin'ny Jona 2019 avy amin'ny vondrona mpirotsaka an-tsitrapo iraisam-pirenena miasa amin'ny olona rehetra avy amin'ny firenena sy ny fitaovana rehetra. Tongasoa ny mpitsoa-ponenana!
ALinks te hanome vaovao azo antoka sy mazava momba ny fiainana any ivelany ho an'ny olona betsaka indrindra maneran-tany. Te-hizara traikefa amin'ny mpizaha tany, mpandeha, mpianatra iraisam-pirenena, mpila ravinahitra, mpifindra monina, mpitsoa-ponenana, ary izay te hahafanta-javatra fotsiny momba ny fiainana any ivelany na ny fomba fandraisana ny fireneny amin'ny vahiny.
ALinks manohana ny Asylum Links.
Asylum Links dia firaisan-kina manerantany ho an'ireo mpifindra monina sy mpitsoa-ponenana voasoratra any Angletera, fikambanana iray an'ny Angletera sy Wales Charitable Incorporate miaraka amin'ny laharana Charity 1181234.
Miverena any amin'ny pejy lehibe